बिज्ञान प्रबिधि Archives - Page2of 11 - Daily Lokmandu
August 23, 2018 Comments Off on यस्तो ठाउँ, जहाँ रात बिताउने कोहीँपनि ज्यूँदो फर्केको छैन, मुटु दह्रो हुनेले मात्र हेर्नुहोला
एजेन्सी । भारतको राजधानी दिल्लीभन्दा ३ सय किलोमिटर टाढा राजस्थानको अलवरमा एउटा पूरानो किल्ला छ । यो किल्ला अहिले भग्नावशेषको रुपमा रहेको छ । यो खण्डहरु कुनै समयमा भने एक भव्य तथा मानिहरुले भरिएको क्षेत्र [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 23, 2018 Comments Off on रुद्राक्ष किन लगाइन्छ ? यसको अद्भूत रहस्या जान्नुहोस्, र एक सेयर गर्नुस नसोचेको काम बन्ने छ ।
नछुटाई पढ्नुहोस् – बुद्दका केहि त्यस्ता वाणीहरु,जसले तपाईको जीवनमा आमुल परिवर्तन ल्याईदिन सक्छ
August 22, 2018 Comments Off on नछुटाई पढ्नुहोस् – बुद्दका केहि त्यस्ता वाणीहरु,जसले तपाईको जीवनमा आमुल परिवर्तन ल्याईदिन सक्छ
संसारका मानव जातिका आदर्श पुरुष गौतम बुद्धका अरबौं अनुयायीहरु रहेका छन् । आज भन्दा झण्डै २६ सय वर्ष पहिले नेपालको कपिलबस्तु जिल्लाको तिलौराकोटमा जन्मिएका थिए गौतम बुद्ध । उनका कालजयी वाणीहरु छन् जसलाई पढेर र [ पुरा पढ्नुहोस ]
चाणक्य नीतिमा- जवान महिलाले जवानीमा कहिल्यै भुल्न नहुने यी ६ कुरा
August 19, 2018 Comments Off on चाणक्य नीतिमा- जवान महिलाले जवानीमा कहिल्यै भुल्न नहुने यी ६ कुरा
कहिलेकाँही हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ कि हामी जीवनमा आफ्नो लागि एकदमै खुसी हुन्छौं । खुसीको बेला हामीले धेरै कुरा भुलिरहेका हुन्छौं, जसले जीवनमा दिर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै जीवनपयोगी सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएका [ पुरा पढ्नुहोस ]
सावधान ! तपाइले सुत्ने कोठामा यी वस्तु राख्नु भएको त छैन ? हटाइ हाल्नुहोस नत्र दरिद्र लाग्न सक्छ
August 16, 2018 Comments Off on सावधान ! तपाइले सुत्ने कोठामा यी वस्तु राख्नु भएको त छैन ? हटाइ हाल्नुहोस नत्र दरिद्र लाग्न सक्छ
दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाउनको लागी धेरै कुरामा ध्यन दिनुपर्छ । जस मध्ये सुत्ने कोठा महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुत्ने कोठमा यी ६ गल्तीहरु भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नुहोस् । यी गल्तीले त्यस कोठामा सुत्ने मानिसहरु बिच अविश्वास [ पुरा पढ्नुहोस ]
महानगरले घटायो कर :: पूरा पढ्नु होस
August 16, 2018 Comments Off on महानगरले घटायो कर :: पूरा पढ्नु होस
विराटनगर : नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बढाइएको कर मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले फिर्ता लिएको छ । जनदबाब र विरोधपछि महानगरको बोर्ड बैठकले कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । महानगरले विभिन्न शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर, शुल्क र करको दर [ पुरा पढ्नुहोस ]
हेर्नुहोस आज नदीकिनारमा खनिरहेको बेला अचानक आयो खटखट आवाज निकाल्दै शिवलिङ्ग निस्किएपछि परे सबै जना चकित हेर्दा दुतको धारा…!
August 16, 2018 Comments Off on हेर्नुहोस आज नदीकिनारमा खनिरहेको बेला अचानक आयो खटखट आवाज निकाल्दै शिवलिङ्ग निस्किएपछि परे सबै जना चकित हेर्दा दुतको धारा…!
नदी किनारमा कोइला खनिरहेको बेला जमिन मुनिबाट खटखट आवाज आयो। आवाज सुनेपछि मजदूरले कर्मचारीलाई खबर गरे। त्यसपछि उक्त स्थानमा मेसिन लगाएर खन्न थालियो। घटना भातरको कानपुरस्थित कोयला घाटको हो। आवाज आएपछि त्यहाँ मेसिन लगाएर खन्न [ पुरा पढ्नुहोस ]
खेतको कुनामा भेटियो रहस्यमय डल्लो, जाँच गर्दा सबै भए चकित ::पूरा थाहा पाउनु होस ।।
August 16, 2018 Comments Off on खेतको कुनामा भेटियो रहस्यमय डल्लो, जाँच गर्दा सबै भए चकित ::पूरा थाहा पाउनु होस ।।
बेला बेला आश्चर्यजनक समाचारहरु आउने गर्दछन । विश्वमा कुनै यस्ता रहस्य हुन्छन् जो अचानक नजिक आउने गर्छन्। जुन चिज रहस्यमय तथा ऐतिहासिक समेत हुने गर्दछन्। अमेरिकास्थित एनटोनिया निवासमा पनि यस्तै भयो । घर नजिकै एलियनको [ पुरा पढ्नुहोस ]
रातमा कुकुर रोएको सुन्नु भएको छ ? यस्ता छन् त्यसका अशभु संकेतहरु (जानीराखे राम्रो )
August 16, 2018 Comments Off on रातमा कुकुर रोएको सुन्नु भएको छ ? यस्ता छन् त्यसका अशभु संकेतहरु (जानीराखे राम्रो )
नेपाली धर्म र परम्परालाई मान्ने हो भने हाम्रा समाजमा रहेका कयौँ बस्तुहरु छन् जसले जीवन र मृत्युका संकेतहरु दिइनै रहेका हुन्छन् । परापूर्वक कालदेखि पुर्खाहरुले अनुभव गर्दै आएका कति घटनाहरुले ति मान्यताहरुलाई प्रमाणित समेत गरिदिएको [ पुरा पढ्नुहोस ]
यस मन्दिरमा स्वयम् देवीको मासिक रजोस्वला हुन्छ, पढ्दा मात्रै पनि सारा मनोकामना पुर्ण हुने
August 16, 2018 Comments Off on यस मन्दिरमा स्वयम् देवीको मासिक रजोस्वला हुन्छ, पढ्दा मात्रै पनि सारा मनोकामना पुर्ण हुने
घर्म, सास्त्र देवी देवता र भगवान सँग जोडिएको रोचक र रहस्यमय कुरा त हजुरहरुले सुन्नु भयकै होला तर आज हामी यस्तो देवीको बारेमा बताउदै छौ जुन देवीलाई मासिक धर्म हुन्छ । जुन नारी वा महिलाको [ पुरा पढ्नुहोस ]
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,380)
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित) (1,348)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,160)